Dalalka Khaliijka oo sabab u ah Saddex dhibaato oo ka jira Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Dalalka Khaliijka oo sabab u ah Saddex dhibaato oo ka jira Soomaaliya
Mudadii u dhaxaysay 2011 illaa 2017, waxaa la jaray 8.2 milyan oo geed, oo laga dhigay dhuxul, loona dhoofiyay dalalka Khaliijka Carabta.
MUQDISHO, Soomaaliya - Markan kama hadlayno faragelinya ay dalka Khaliijka ku hayaan siyaasadda Soomaaliya, ee waxaan diiradda saaraynaa dhibaatooyinka ay ka abuureen dhanka bay'adda ama degaanka.
Inkastoo gacan Soomaali lagu sameynayo dhibka, haddana waxaa sabab u ah dalabka Khaliijka ee Dhuxusha Soomaaliya, oo noqotay il-dhaqaale oo qof walba u ordayo inuu ka taajiro, waxayna tani keentay xaalufinta degaanka, oo dhirtii laga jarayo.
Dadka reer miyiga ah iyo xoolahooda waxay cunaan ayay waayeen markii nabaad-guurka ku dhacay dhulkii ay ku-tiirsanaayeen, halka beeralayda iyaguna fahataado ka baab'iyay dalagii ay beerteen, waxaana dhacday cunto-yari.
Mudadii u dhaxaysay 2011 ilaa 2017, oo lix sano gudahooda ah waxaa la jaray 8.2 milyan [Sideed milyan iyo labo boqol oo kun] oo geed, iyadoo laga dhigay dhuxul loo dhoofiyay dalalka Khaliijka. Xaalufka degaanka, ee sii kordhaya wuxuu u baahan yahay in la dab-qabto, oo laga celiyo duulkan kusoo duulay.
Dhirtoo la jaraa waxay sababtay nabaad-guur ku dhacay degaanka, waxayna horseeday abaaro, fatahaaddo iyo cunyo-yari soo noq-noqday, oo saameeyay malaayiin Soomaali ah oo horey u ahaa beeralay iyo xoolo-dhaqato, kuwaasoo barakaciyaal noqday hadda.
Inkastoo Gollaha Amaanka uu 2012-kii soo saaray qaraar tirsigiisu yahay 2036, oo lagu mamnuucay dhoofinta dhuxusha Soomaaliya, haddana ma joogsan dhibaatadda, oo wali waxaa laga dhoofiyaa dekado ku yaalla dalka, oo Kismaayo ugu horeyso.
Xitaa dhoofinta dhuxusha waxay qeyb wayn ka ciyaaraysaa amaanka dalka, sababtoo ah waxaa dhaqaalo badan kasoo gala Kooxda Al-Shabaab, waayo geedaha ugu badan ee laga sameeyo waxay ku yaalaan degaanada ay maamusho.
Kooxda dhaqaalaha badan ay hesho jidad, isbitaallo iyo goobo waxbarasho kuma dhisto, adeeg bulsho kuma fuliso, waxay kaliya kusoo iibsataa hub iyo waxyaabaha qarxa oo dagaalka Soomaaliya u adeegsato.
0 Comments Topics: dhuxusha soomaaliya